Madaxwayne Farmaajo iyo Marwada 1aad Saynab oo booqasho shaqo ku tagay dalka Masar |
Madaxwayne Farmaajo iyo Marwada 1aad Saynab oo booqasho shaqo ku tagay dalka Masar
Madaxweynaha JS Mudane Maxamed Cabdudullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Sharma Sheekh ee dalka Masar halkaas oo uu ka furmayo shirka Ganacsiga Afrika 2017.
Magaalada Sharma Sheekh ee Dalka Masar waxaa maanta ka furmaya shir wadatashi ah oo ku aadan arrimaha horumarinta ganacsiaga Qaaradda Africa oo ay martigelinayso dowladda Masar.
Soomaaliya waxaa uga qebgalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan magaaladaasi.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa siweyn loogu sooo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Sharma-Alsheekh,waxaana soo dhaweyeey diblomaasiyiinta Safaaradda Soomaaliya ee Masar iyo madax katirsan dowladda dalkasi.
Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa waxaa safarkiisa Masar ku wehlinaya Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, waxaa shirka uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah, iyaddoo lagu gorfeyn doono horumarka ganacsiga Qaaradda Afrika.
Marka laga soo tago Wafdiga uu hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya, sidoo kale waxaa shirkaas Masar ka dhacaya ka qeyb gali doona qaar kamid ah Madaxda wadamada Afrika, waxayna Madaxdasi shirka Gacansiga Africa 2017 Forum ka jeedin doonaan khudbado.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filaya in uu kulamo la yeeshey madaxda ka qeybgalaysa shirkaasi qaar kood,kuwaasi oo xiriir uu kala dhexeeya Soomaaliya.
Waftiga ayaa waxaa lasocota marwada 1aad ee dalka Daawo